China Rubber Roller ifektri abakhiqizi | Amandla
Njengoba abanolwazi ngokwezifiso iraba roller umakhi e China, thina ukuphakela ezinamasondo ahlukahlukene ukuze inkambu ezahlukene.
Izinto:Yamukela amakhemikhali enjoloba akhiwe avela e-US naseJalimane ukuze akhiqize zonke izinhlobo zama-roller ezinjoloba. Injoloba Yemvelo, Injoloba yeNitrile, i-Neoprene, i-Butyl, i-EPDM, i-Polyurethane, i-Silicone, i-Fluorine njll.
2. Ukukhiqizwa:Ukuba ngqongqo ngokwedlulele ngenqubo yokukhiqiza.Izinqubo zokusebenza ezidingekayo ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi ethembeke kakhulu. Imikhiqizo yethu inobuchwepheshe obuphambili bokukhiqiza kanye nekhwalithi yomkhiqizo omuhle kakhulu, owaziwa ngabasebenzisi basekhaya nabangaphandle. Le nkampani isibe yiyunithi ekhethiwe yokuthengwa kwenjoloba yamafemu ezimboni eziningi ezinkulu zokuphrinta.
3. Ukulawulwa Kwekhwalithi: Kuhlolwe kahle ngethuluzi lethu lokulinganisa irabha elicwengile le-PSF.
4. Ukupakisha:Sibheka ukupakisha njengesixhumanisi esibalulekile. Ukupakisha ngokucophelela futhi kufanelekile kubalulekile ukuqinisekisa isimo esihle nokulethwa ngempumelelo kwamaroli enjoloba.
5.Ukusikhetha:Ukwazisa ubuchwepheshe nokuthembeka okusuka enhliziyweni, iJinan Power Rubber Roller Equipment Co, Ltd. izinikele ekukhiqizeni ama-roller ezinjoloba ezisezingeni eliphakeme eduze nezidingo zenkathi yesayensi nobuchwepheshe. Akunandaba ukuthi ukhetha luphi uhlobo lwerabha yerabha, nakanjani ungathola ukuzethemba. Sisebenza kanzima kakhulu ngenqubo yokukhiqizwa kwenjoloba yerabha, futhi siqinisekisa ikhwalithi ephezulu nokuqina okuthembekile ngokungazami nemizamo yokuthuthukisa izinqubo zomsebenzi nokuhlanganisa amandla obuchwepheshe kuzo zonke izici.
6. Izici ezahlukahlukene zeRubber Roller
- Roller Yemvelo Yemvelo - Ukuzivumelanisa nezimo okuhle kakhulu namandla omshini, ukumelana okuhle kwe-alkali kwendwangu, iphepha lesikhumba, imishini yokupakisha, efana ne-roller-type compactor kanye ne-metallurgy, eyezimayini kanye nezinye izinhlobo zohlobo lwe-roller.
- Nitrile iraba roller - ukumelana kahle kukawoyela, nokumelana nokugqoka, ukulwa nokuguga, ukumelana nokushisa nakho kuhle ekuphrinteni, ekuphrinteni nasekudayiweni, ifayibha yamakhemikhali, iphepha, ukupakisha, imishini yokulungisa amapulasitiki nokunye ukuxhumana namafutha e-hydrocarbon kanye namafutha kuphela.
- I-Neoprene Roller - ukumelana nokuhuzuka okuhle kakhulu, ukumelana nomlilo okuphezulu, ukumelana nokuguga, ukumelana nokushisa okuhle, ukumelana namafutha kanye nemishini ye-asidi nemisebe ye-PCB, ipulasitiki, isikhumba, ukuphrinta, ukudla insimbi yaseNdiya, imishini ejwayelekile yokumboza.
- Butyl iraba roller - ukumelana okuphezulu kuma-solvents amakhemikhali, ukumelana nokushisa okuhle (170 ℃), i-asidi enhle, futhi kusetshenziswe kumishini yokuphrinta umbala, imishini yokushuka, imishini yokumboza.
- Iroli yerabha ye-EPDM - ukumelana okuhle kakhulu kokuguga kwe-ozone nokumelana nesimo sezulu, izinga lokushisa elibanzi elibanzi lingaqala kusuka ku- -65 kuya ku-140 ℃ emsebenzini wesikhathi eside, ukusebenza kwe-insulation, kwemishini yokuphrinta epulasitiki, imishini yokushuka, izindawo ezijwayelekile
- I-roller yenjoloba yensimbi - amandla aphezulu kakhulu wokusebenza futhi agqoke ukumelana, ukulwa nokuguga nokuqina kukawoyela nakho kuhle kakhulu, okuvame ukusetshenziswa ekwenzeni iphepha, i-fiber yamakhemikhali, ukucutshungulwa kwezinkuni, imishini yokucubungula ipulasitiki.
- Iroli yerabha le-Silicone - ukusebenzisa ukumelana nokushisa okuphezulu, i-ozone, i-chemical inert kanye nepulasitiki engeyona yokunamathisela ukucubungula okushisayo kwemikhiqizo ye-viscous, njengokugoqa i-polyethylene, i-embossed, ukuphrinta nokudaya kanye nefilimu nezindwangu zokunamathisela indwangu, i-plastic composite, i-corona processing imishini, i ibuye isetshenziselwe ukukhiqizwa kukashukela nokukhululwa kwamasondo wokuphakela umshini wokupakisha kanye nokukhiqiza okungalukiwe.
- Iroli yerabha yeFluorine - ukushisa okuphezulu kakhulu, uwoyela, i-asidi, njengokusebenza, ukumelana negesi, ukufakwa kukagesi, ukulwa nokuguga, ukumelana nelangabi, izakhiwo ezingagqokiwe nakho kuhle kakhulu kwemishini ekhethekile yokumboza.
- I-Roller yomshini wokuphrinta wedijithali obanzi.
- Roller for iphepha nepepper imishini.
- Roller for yendwangu imishini.
- Roller for plastic ifilimu imishini.
- Roller for plywood elihambayo uhlelo.
- Roller emayini kanye lemifanekiso umkhakha.
Langaphambilini I-Autoclave- Uhlobo Lokushisa Kagesi
Olandelayo: Idivayisi Yekhanda Le-Rubber Roller Alloy Grinding
Rubber Roller Ukugaya Machine
Rubber Roller Ukwenza Machine
Irabha Ukuxuba Mill (Ama-Motors Amabili Nokukhipha Okubili)
Isihlungi seRubber / Isihlungi seRubber
I-Rubber Roller Sand Belt Ukupholisha Idivayisi
Vula Uhlobo Lwe-Rubber Mixing Mill